agile terminologies uye tsananguro
Kuru Agile Agile terminologies uye Tsananguro
Kuongorora kwakarongeka kunoitwa kuona kana sisitimu inogutsa maitiro ayo ekugashira uye kugonesa mutengi kuona kana kusabvuma sisitimu.
Agile Software Kuvandudza Maitiro
Agile software yekuvandudza inoisa sisitimu inorema pakubatana, kupindura shanduko, uye kudzikisira kwemarara mukati mekusimudzira kutenderera. Agile software yekuvandudza inotarisa pakuchengeta kodhi yakapusa, kuyedza kazhinji, uye kuendesa anoshanda mabhii ekushandisa iko pavanongogadzirira.
Chinhu chakakosha Agile musimboti wekuendesa (zvingangoita) software inosunungurwa mushure meese iteration.
Kudzokera kumashure Kushambidzika
Kushambadzira kumashure ndeyekuwedzera nyaya dzevashandisi kutsva kumashure, kuisa pamberi nyaya dziripo sezviri kudikanwa, kugadzira fungidziro, uye kugadzirisa nyaya hombe muzvinyorwa zvidiki kana mabasa. Panzvimbo pekushongedza kumashure kumashure zvishoma nezvishoma mukati meiyo iteration, timu inogona kubata chikamu chekutsvagisa kumashure kamwechete paiteration.
Kana mugadziri akawedzera shanduko kune yekodhi kodhi repositi iyo inokonzeresa kukundikana kweinotevera kuvaka maitiro, iye mugadziri 'aputsa kuvaka.'
Iko kunofanirwa kuve kuzvipira kwechikwata kunodzivirira kutyora iyo kuvaka sezvo kuchinonoka kusimudzira uye kunogona kuve bhodhoro revamwe vanogadzira. Kana iyo kuvhu yaputswa, timu yekusimudzira ndeye kutora matanho nekukurumidza kugadzirisa kuvaka.
Iyo yekuvaka yakaputsika kana maitiro ekuvaka asingakwanise kupedzwa zvinobudirira kune chero huwandu hwezvikonzero zvinosanganisira (asi zvisina kuganhurirwa) kutadza kuumbiridza, kuumbiridza nenyevero dzisingagamuchirike, kana kutadza kwenhamba ipi neipi yema automated bvunzo.
Vaka Maitiro / Vaka Pombi
Maitiro ekuvaka kana kuvaka pombi, ndiyo nzira iyo nyaya inoenda kubva pakutanga kusvika mukugadzirwa, kazhinji ichienda nematanho akasiyana uye macheki ekuona mhando.
Iyo pombi yekuvaka inotsanangura mafambiro ebasa rekuendesa software uye chii chinoitika padanho rega rega.
Girafu inoratidza iyo yakazara maawa emaawa asara pazuva. Inotaridza panomira timu maererano nekupedzisa mabasa akaitwa kune sprint. Iyo X-axis inomiririra mazuva mune iyo sprint, nepo iyo Y-axis iri simba rakasara.
Muchikorobho, huku ishoko rinotaurwa kune mumwe munhu anofarira chirongwa asi asina basa rekushanda pane rimwe basa muiteration inoshanda. Vanogona kucherechedza musangano wechikwata asi vasingakwanise kuvhota kana kutaura.
Continuous Integration (CI) ndeye eXtreme Programming (XP) tsika uko nhengo dzeboka rekutakura dzinowanzobatanidza basa ravo (semuenzaniso paawa, kana kamwe chete zuva nezuva).
Kubatanidzwa kwega kwega kunosimbiswa neyakagadzirwa kuvaka, iyo zvakare inoita kuyedza, kuti ione chero mhosho dzekubatanidza nekukurumidza uye otomatiki. Chinangwa chikuru cheCI ndechekudzivirira izvo zvinowanzonzi kusangana kana kusanganisa gehena.
Chikwata chinoumbwa nenhengo dzine hunyanzvi hwese hunoshanda uye hunyanzvi (hunowanzodaidzwa kuti vane hunyanzvi hwakawanda) hunodiwa kupedzisa chirongwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Mutengi anowanzo tsanangurwa seanogamuchira kana mushandisi wechigadzirwa. Vatengi vanogona kunge vari vekunze kana vekunze kusangano. Mutengi anogona kunge ari munhu mumwe, dhipatimendi, kana boka hombe.
Vatengi vemukati dzimwe nguva vanonzi 'Bhizinesi.'
Mazuva ese kusimuka
Musangano wezuva nezuva wechikwata waiwanzoita chinhu chekutanga mangwanani kuti upe mamiriro enzvimbo kunhengo dzechikwata. Misangano inowanzo kuve nguva-yakarongedzwa kusvika pamaminitsi mashanu kusvika gumi nemashanu, uye inoitwa yakamira kusimudzira vanhu kuti vachengete musangano mupfupi uye kusvika padanho.
Tsanangudzo Yekuita (DoD)
Maitiro ekutambira basa rapera. Kujekesa aya maitiro ibasa reboka rese, kusanganisira bhizinesi. Kazhinji, pane nhanho nhatu dze 'Kuitwa' (inozivikanwa zvakare seKuitwa-Kuitwa-Kuitwa):
Yakaitwa: Yakagadziriswa, inomhanya pane yekuvandudza bhokisi
Kuitwa: Yakavimbiswa nekumhanya yuniti bvunzo, kodhi kuongorora, nezvimwe.
Kuitwa: Yakasimbiswa seyenhengo dzinoburitswa nemiedzo inoshanda, ongororo, nezvimwe.
Maitiro chaiwo ezvinoreva kuti 'Zvaitwa' anosiyana kuzadzisa zvido zvesangano nehurongwa hwakasiyana.
Iyo huru kwazvo mushandisi nyaya iyo inozopedzisira yaputswa pasi kuita diki nyaya. Epics inowanzo shandiswa sevachengeti venzvimbo dzemifungo mitsva uye nenyaya dzinoenderana nekugadziridzwa mumashure ekumhanya.
Epic nyaya dzinobatsira Agile budiriro zvikwata zvinobata kubata uye kushambadzira yavo backlog yechigadzirwa.
Maitiro ekubvumirana pane chiyero chehukuru hwenyaya kana mabasa mune backlog yechigadzirwa. Pane mapurojekiti agile, fungidziro inoitwa nechikwata chakanangana nekuendesa iro basa, kazhinji vachishandisa kuronga mutambo kana kuronga poker.
Iyo agile software yekuvandudza nzira iyo inoitirwa kugadzirisa software mhando uye kupindura pakushandura vatengi zvinodiwa.
XP inotsigira inowanzo 'kuburitswa' mune ipfupi budiriro kutenderera, inoitirwa kusimudzira kugadzirwa uye kuunza nzvimbo dzekutarisa panogona kutorwa zvitsva zvinodiwa nevatengi.
Zvimwe zvinhu zvehurongwa hwakanyanya zvinosanganisira: mapurogiramu maviri, kuwongorora kwakanyanya kodhi, kuyedzwa kweyuniti, Kuenderera Mberi Kusanganisa kutumidza mashoma.
Inobatana bhizinesi basa kana hunhu hweiyo software chigadzirwa kana system. Zvimiro zvinowanzo kuve nezvakawanda zvakadzama (unit) zvinodiwa. Chinhu chimwe chete chinowanzoitwa kuburikidza nenyaya zhinji.
Zvimiro zvinogona kunge zvichishanda kana zvisingaite; zvinopa hwaro hwekuronga nyaya.
Nhevedzano yenhamba inotorwa nenhamba inotevera nekuwedzera pamwechete maviri apfuura (semuenzaniso 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…). Iwo akateedzana anoshandiswa kukura saizi muAgile maitiro ekufungidzira senge kuronga poker.
Chero chipi zvacho chinodzivirira nhengo yechikwata kuita basa nemazvo sezvinobvira chipingamupinyi. Nhengo yega yega yechikwata ine mukana wekuzivisa zvipingaidzo pamusangano wezuva nezuva wekumira.
Basa raScrumMaster ndere kuona kuti zvipingaidzo zvinobviswa nekukurumidza kuitira kuti timu irambe ichiita zvibereko.
Nguva (kubva pa1 vhiki kusvika kumwedzi miviri mukureba) panguva iyo timu yeAgile yekuvandudza inoburitsa kuwedzera kwesoftware yakapedzwa. Yese system zvikamu zvehupenyu (zvinodiwa, dhizaini, kodhi, uye bvunzo) zvinofanirwa kuzadzikiswa panguva yekuitisa uye zvobva zvaratidzwa kuti iteration igamuchirwe seyakagadziriswa zvinobudirira.
Pakutanga kweiyo iteration, bhizinesi kana muridzi wechigadzirwa anozivisa inotevera (inonyanya kukoshesa) chunk yebasa kuti timu ipedze. Dare rekuvandudza rinofungidzira danho rekuyedza uye rinozvipira kupedzisa chikamu chebasa panguva yeiteration.
Kanban chishandiso chinotorwa kubva mukugadzira kwakasendama uye inosanganisirwa nebazi rezviito zveagile zvakasununguka zvinonzi Lean Software Development. Kanban anomanikidza kuti yakawanda sei basa iri kuenderera inobvumidzwa kuitika panguva imwe chete.
Musiyano mukuru pakati peKanban neScrum ndeyekuti mipendero yeScrum inoshanda irikuenderera mberi kuburikidza nesprints uye Kanban inogumira basa riri kuenderera nekukanganisa kuwanda kwebasa rinogona kuitika panguva imwechete (semuenzaniso N mabasa kana N nyaya).
Lean Software Kuvandudza
Lean software kuvandudza kana kungoti Lean yakanangana nekudzora marara uye kugadzirisa iyo software yekugadzira kukosha kwerukova.
Chishoma Chinogoneka Chigadzirwa (MVP)
Chinhu chidiki chinoshanda chinogona kuvakwa uye kuyedzwa uye kuendeswa mune yakapihwa nguva iyo inopa kukosha kune vashandisi.
Anogadzikana software yekuvandudza maitiro umo ma programmers maviri anoshanda pamwechete panzvimbo imwe yebasa. Imwe mhando mukodhi uye imwe ichiongorora yega yega kodhi yekodhi sezvainyorerwa mukati. Munhu ari kunyora anonzi mutyairi. uye munhu ari kuongorora kodhi anonzi mucherechedzi kana Navigator. Ivo vaviri programmers vanochinja mabasa kazhinji.
Mumwe munhu ane basa rekuita basa pane inoshanda iteration. Icho chakapesana nehuku. Nguruve dzinoshingairira kubatanidzwa muchirongwa ichi.
Kuronga Poker inzira yekubvumirana-yakavakirwa yekufungidzira, kazhinji inoshandiswa kufungidzira kuyedza kana saizi yakakura yemabasa mukuvandudza software. Chikwata chinoshandisa iyo fibonacci dzakateedzana kana T-shati sizing yekufungidzira nyaya panguva yekuronga poker mutambo.
Zvakare kutaura, chigadzirwa chinoreva muunganidzwa wezvinhu zvakasanganiswa uye zvakapetwa mune software kuburitsa iyo inopa kukosha kumutengi kana kumusika.
Chigadzirwa Muridzi nderimwe remabasa akakosha muScrum. Basa reiye Chigadzirwa Muridzi rinosanganisira:
Kugadzira, kusimudzira, uye kutaurirana chigadzirwa chiono
Kugadzira uye kutungamira timu yevanogadzira kuti vape zvakanakisa kumutengi
Kuongorora chirongwa ichi kuchipesana nezvinangwa zvaro zve ROI uye chiratidzo chekudyara
Kuita sarudzo nezve nguva yekugadzira kuburitswa zviri pamutemo
Chigadzirwa backlog yakafanana nechishuwo runyorwa rwezvinhu izvo bhizinesi zvinoda kuendesa munguva refu. Iko kuunganidzwa kwenyaya uye mabasa ayo timu achashanda pane imwe nguva mune ramangwana.
Muiti Wechigadzirwa anochengetedza urwu runyorwa rwezvigadzirwa kumashure maererano nezvakakosha zvebhizinesi nezvido. Izvo zvinhu zviri kumashure zvinofanirwa kuratidza gwara renzira yebhizinesi.
Kuchinja iripo software kodhi kuitira kuti uvandudze iyo yakazara dhizaini. Kugadzirisa zvekare hakuchinje hunhu hunoonekwa hwe software; inovandudza mamiriro ayo emukati.
Iyo yekuburitsa chirongwa chirongwa chekuburitsa software mukugadzira. Chaizvoizvo zvirongwa zvekuburitsa zvinosanganisira zvakakosha zvinhu zvinofanirwa kuunzwa, pamwe nemazuva anoenderana ekuburitsa.
Musangano wenguva yakatenderedzwa wakaitwa kumagumo esprint umo timu inoongorora maitiro ayo kuona kuti chii chakabudirira uye chii chingagadziriswe. Iyo yekudzoka kumashure ndiyo kiyi yekuenderera kunatsiridza.
Mhedzisiro yakanaka yekudzokororazve ndeyekuona chimwe kana zviviri zvepamusoro-pekutanga zviito zvinhu izvo timu inoda kushanda mune inotevera iteration kana kuburitsa.
Scrum furemu yekugadzira yakaoma software zvigadzirwa mune inowedzeredza uye inowedzera mafashoni uye ndiyo inonyanya kuzivikanwa Agile fomati.
Scrum ine inoteedzana yetepfetwa iterations - inonzi Sprints - yega yega inoguma nekuendesa kwekuwedzera kwesoftware inoshanda.
Iyo scrum timu ndeye muchinjikwa-unoshanda uye unozvirongedza-iro boka iro rinotarisira kuendesa software.
Iyo scrum timu inosanganisira akawanda-hunyanzvi vanhu vanonzwisisa zvinodiwa nevatengi uye kuitisa software dhizaini, kukodha uye kuyedza. Humwe hunyanzvi (semuenzaniso UI dhizaini, usability, nezvimwewo) inogona zvakare kuverengerwa.
Chikwata cheskram chinotarisira kwese kuzvipira kwebasa uye mhedzisiro.
Iyo ScrumMaster ine basa rekuchengetedza iyo Scum maitiro uye hutano hwakazara hwechikwata. Iyo ScrumMaster inovimbisa kuti timu inoshanda zvizere uye inogadzira nekubvisa chero zvipingaidzo zvinogona kunge zvichikanganisa kufambira mberi kwechikwata. Iyo ScrumMaster inorongawo mhemberero dzeScrum.
Nyaya kana basa rakanangana nekupindura mubvunzo kana kuunganidza ruzivo, pane kuita zvigadzirwa zvechigadzirwa, nyaya dzevashandisi, kana zvinodiwa.
Dzimwe nguva nyaya yemushandisi inogadzirwa isingakwanise kufungidzirwa kudzamara timu yekusimudzira yaita rimwe basa chairo kugadzirisa mubvunzo wehunyanzvi kana dambudziko rekugadzira. Mhinduro ndeyekugadzira 'spike,' inova nyaya ine chinangwa chekupa mhinduro kana mhinduro.
Mukugadzirwa kwechigadzirwa, sprint inguva yakatarwa yenguva apo iro basa chairo rinofanirwa kupedzwa uye kugadzirirwa kuti riongororwe. Iyo yakajairwa sprint kureba kazhinji inowanzoita mavhiki maviri uye kazhinji haigare yakareba kupfuura mavhiki mana.
Rondedzero yezvimiro, nyaya dzevashandisi kana mabasa anodhonzwa kubva muchigadzirwa backlog kuti chiongororwe kupedzisa panguva yekuuya kwekumhanya. Chigadzirwa backlog maficha uye mushandisi nyaya dzakaputswa kuita mabasa kuti vagadzire iyo sprint backlog panguva yemusangano wekuronga kwesprint.
Mumisangano yekushambadzira nyaya, ruzivo rwevashandisi nyaya dzakaburitswa kunze. Maitiro Ekubvuma akanyorwa uye akajekeswa. Nyaya dzinofungidzirwawo padanho iri.
Chinangwa chechikamu chino ndechekuona kuti munhu wese anobatanidzwa mukugadzira uye kuyedza ngano anogovera kunzwisisa kwakafanana mamiriro enhau dzacho asati atanga kusimudzira nyaya.
Nhau dzekushambadzira nyaya dzinowanzoitirwa pakati-kumhanya kweinotevera Sprint kuitira kuti timu izive nezve iro basa rebasa rinotevera.
Vatori vechikamu ndivo chikamu chekramamu, skram tenzi uye muridzi wechigadzirwa.
Zvikamu zvekuronga zveSprint zvinoitwa nguva pfupi kusati kwatanga kwemutsva. Muchikamu chino timu inoona mabasa anoda kuitwa uye voona kuti ingani poindi dzenyaya dzavanozvipira kune iyo inotevera sprint.
Pamberi pezvirongwa zvekuronga zvekumhanyisa, nyaya idzi dzinofanirwa kunge dzakaverengerwa uye nekufungidzirwa panguva dzezvirongwa zvekushongedza nyaya, kuitira kuti pasave nenguva inopambadzwa panguva yekuronga kwekumhanya.
Vatori vechikamu iscrum master uye timu yescrum.
Iyo Yevashandisi Nhau (aka Nhau) inogona kufungidzirwa seicho chinodikanwa, chimiro chine imwe kukosha kwebhizinesi.
Nhau dzinotsanangura iro basa rinofanirwa kupedzwa kuendesa chimiro cheichi chigadzirwa. Nhau idanho rekutanga rekutaurirana, kuronga, uye kutaurirana pakati peScrum Team, Bhizinesi Varidzi uye Muridzi wechigadzirwa.
Nhau dzine zvinhu zvinotevera:
Tsananguro, kazhinji mumabhizinesi mazwi
Saizi, yeakakomba fungidziro yezvinangwa, inowanzo kuratidzwa mune nyaya poindi (senge 1, 2, 3, 5)
Imwe kana anopfuura Maitiro Ekubvuma, achipa tsananguro pfupi yekuti nyaya yacho ichasimbiswa sei
Mabasa ndidzo tsananguro dzebasa chairo rinoitwa nemunhu kana vaviri kuti apedze nyaya. Izvo zvinogoneka, zvinogoneka, uye zvinoteedzana zvikamu zvebasa. Kazhinji, pane akati wandei mabasa nenyaya imwe neimwe.
Izwi rakagadzirwa na Ward Cunningham kutsanangura chisungo chinowanikwa nesoftware software painosarudza dhizaini kana nzira yekuvaka iyo inobatsira munguva pfupi asi izvo zvinowedzera kuomarara uye zvinodhura munguva refu.
Maitiro ekufungidzira iro basa rinodiwa kupedzisa nyaya muhukuru hweT-shati, kureva kuti Diki (S), Pakati (M), Huru (L) kana X-Huru (XL)
Iyo timebox inguva yenguva yehurefu hwakagadzwa wakapihwa kuzadzisa chimwe chinangwa. Mukukudziridza agile, iterations uye sprints ndiyo mienzaniso yemabhokisi enguva anodzikamisa basa mukuita uye danho rekuwedzera kufambira mberi.
Velocity inoyera basa rakawanda sei timu rinogona kupedzisa mune iteration. Velocity inowanzo pimwa munyaya kana mapoinzi enyaya. Velocity inogona zvakare kuyera mabasa mumaawa kana chinhu chakaenzana.
Velocity inoshandiswa kuyera kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti timu iendese mhedzisiro mhedzisiro nekuwedzera pamusoro pehwaro hwekutanga kwayo kuita.
Shanda Mukufambira Mberi
Chero basa risati rapedzwa asi iro rakatounza mari yemubhadharo kusangano. Chero software yakagadziriswa asi isina kuendeswa kugadzirwa inogona kutariswa sebasa riri kuenderera.
maitiro ekuenzanisa maviri zvinyorwa muJava
Chii chiri Basa reManeja weQA?
Java Loop Kupfuura Chinyorwa
Maitiro Ekutumira GirafuQL Mutation Chikumbiro muJMeter